घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » स्वास्थ्य समाचार » अफ्रिकामा पहिलो COVAX खोपहरू: निष्पक्ष र समान? » पृष्ठ 2
लेखनको समयमा डब्ल्यूटीओको बैठकको निष्कर्ष अझै थाहा छैन तर यसले २ महादेशका अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको अवस्थाका सामान्य पक्षहरू र अफिस र ल्याटिन अमेरिकाको अवस्थाको सामान्य पहलको विश्लेषण गर्न सकेको छैन। खोप वितरणमा नीति परिवर्तन।
एक डब्ल्यूटीओ निर्णय अनावश्यक हुन सक्छ। कम से कम राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो निर्णयले अनुमति दिन सक्छ कि अन्य उपकरणहरू छन्, विगतमा कहिलेकाहीं यस्तो भएको थियो। यो त्यस्तो होइन, राष्ट्रिय उपायहरूको प्रभावकारिता, यस महामारीको भौगोलिक प्रसार र गुरुत्वाकर्षणको अद्वितीय चरित्र र उनीहरूको दायरामा फराकिलो धेरै अन्य कारणहरूको लागि।
दुई मुख्य प्रश्नहरू:
के यो सिद्धान्त है कि स्वास्थ्य फार्मास्यूटिकल कम्पनीहरूको व्यावसायिक रुचि भन्दा उच्च वर्गको सार्वजनिक हित हो?
के यसले राज्यहरुलाई यस विषयमा नियमन गर्ने अधिकार दिन्छ?
यी प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्दै कसैले औषधि कम्पनीहरूले गरेको महत्त्वलाई अस्वीकार गर्दैन। उनीहरूको कार्यले एक बर्ष भन्दा कममा सुरक्षित रूपमा अनुमोदित खोपहरूको असाधारण परिणामलाई अनुमति दियो। यद्यपि यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि उनीहरूले धेरै महत्वपूर्ण सार्वजनिक कोष र आर्थिक प्रतिबद्धता प्राप्त गरे। केही केसहरूमा, इजरायल र युएईमा जस्तै, खोपहरूको परीक्षणको लागि पनि समर्थन थियो। फाइनान्सि colla र सहयोगी देशहरूले आईपीआरमा कुनै सह-सहभागिताको अपवादको साथ यी पूर्व-अधिकार अधिकारहरू प्राप्त गरे।
डब्ल्यूटीओले डिसेम्बरको बैठकमा उक्त प्रस्तावमा छलफल गर्ने अवसर पाइसकेको थियो। १ ,164 सदस्य राष्ट्रको बहुमतको समर्थनका साथ मतगणना भए पनि यो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पुगेको थिएन। अधिकांशले प्राप्त गर्न सक्ने सामान्य विवरणहरू जस्तै अग्रिम बजार प्रतिबद्धताहरू (एएमसी) ले नैतिक र चिकित्सा प्रभावकारताको आधारमा टीकालाई आर्थिक क्षमताको आधारमा खोपको बिग्रेको विकरालताको लागि छुट दिइएन, चिकित्सा आधारमा नभई। , र मान्यता यो हो कि यी चिन्ताहरु डब्ल्यूटीओ सदस्यहरु द्वारा बयान मा प्रतिबिम्बित।
वास्तवमा, MsF, साझा नैतिक सिद्धान्तहरूको सन्दर्भ बाहेक, खोप उत्पादनको विस्तारलाई जायज ठहराउने थप कारणहरू हाइलाइट गर्दछ। भ्याक्सिन प्रकार्य एक सम्भावित संक्रमणबाट बचाउन मात्रै हो। कडा असमान वितरण, जस्तो देखिन्छ, ती देशहरूमा संक्राप बढ्दछ जसले उनीहरूलाई थोरै र कम मात्रामा प्राप्त गर्दछ, र यसले नयाँ उत्परिवर्तनको उदयलाई समर्थन गर्दछ। तिनीहरूको भौगोलिक नियन्त्रण असम्भव छ, किनकि भूमध्यसागर हुँदै अफ्रिकाबाट इटाली र स्पेनमा बसाईएको अनुभवले देखायो। संक्रमणको परिणामस्वरूप फैलाएको असरले धनी देशहरूको खोप नीतिहरूको प्रभावलाई खतरामा पार्न सक्छ। केही राजनीतिज्ञहरू यो अवैध हो भनेर जोड दिन चाहन्छन्। र त्यसो भए, के? यो तथ्य हो कि अरू धेरै भन्दा धनी देशहरू अज्ञात छैन।
यद्यपि यी देशहरूले स्वतन्त्र बजारमा निर्भर हुन रुचाउँदछन् जसले उनीहरूलाई आवश्यक खुराकहरू सुरक्षित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन् र उनीहरूका नेताहरूले प्राय: खोपहरू लिन आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताहरू गर्न रुचाउँथे जुन कम्तिमा अहिलेसम्म आईपुगेको छैन वा सुझाव दिन आएको छ। कम संसाधन देशहरूमा अतिरिक्त खोपहरू पठाउँदै सार्वजनिक रूपमा सामानहरू लिने निर्णयकर्ताहरू राज्यहरू हुन् भनेर ठूलो स्वरले घोषणा गर्नुको सट्टा।
फार्मास्यूटिकल फर्महरूले दाबी गर्छन् कि कसरी जान्ने-कसरी साझा गर्नु असम्भव छ। यो गलत छ। यस्तो साझेदारी भारत, ब्राजील, अर्जेन्टिना, र मेक्सिको जस्ता देशहरूमा भयो। उत्पादनमा भाग लिनको लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता हुने अन्य देशहरूले खरिद गर्नका लागि उनीहरूको अनुरोधलाई हेरेका छन्, हामी किनेको दोहोर्याउँदछौं, अधिकारहरूलाई बेवास्ता गरियो। यो डोमिनिकन रिपब्लिकको मामलामा भयो। यस देशमा उच्च-स्तरीय बायो टेक्नोलॉजी केन्द्र छ, जुन विश्वविद्यालय रिक्टर्सहरूको सम्मेलनका अध्यक्षले पुष्टि गरे अनुसार खोप उत्पादन गर्ने वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षमता छ। गत अगस्टमा गणतन्त्रका राष्ट्रपति श्री लुइस अबिनाडरले एउटा प्रमुख उत्पादक कम्पनीलाई खोपहरू किन्न मात्र नभई उत्पादनको अधिकारमा पनि वार्ता गर्न आग्रह गरे। अनुरोध बेवास्ता गरियो।
धनी देशहरूको छोटो दर्शन केवल "त्यहाँ" र "छैन" देशहरू छन् जहाँ नीति को महामारी जोखिम उपेक्षा गरेर मात्र प्रमाणित छैन।
सम्भवतः आन्तरिक नीतिको कारणका लागि यी देशहरूको लक्ष्य हासिल गर्नु हो, प्रत्येकले छुट्टाछुट्टै खोपको एउटा जोडदार अभियान मार्फत चाँडो भन्दा चाँडो ज .्गली बग्गी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हो। अपेक्षित उपलब्धि मिति सम्भावित पूर्वानुमान गर्वका साथ घोषणा गरिन्छ, महामारी जताततै पराजित गर्नुपर्नेछ भन्ने भनाइसहित भए पनि, किनकि स्पेनका राष्ट्रपति, श्री पेद्रो सान्चेजले अबु धाबी जी २० सम्मेलनमा भनेका थिए, “हामी सुरक्षित हुने छैनौं। सबैजना सुरक्षित नभएसम्म
यसलाई बेवास्ता गरिएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्स (आईसीसी) द्वारा गरिएको एक अध्ययनले अनुमान गरेको छ कि यदि धनी देशहरू बर्षको पहिलो आधामा आफ्नो जनसंख्याको खोप पूरा गर्न सफल भए भने, जबकि त्यतिबेलासम्म गरिब देशहरू मात्र हासिल गरिसकेका छन्। एक सीमान्त खोप, आर्थिक परिणाम घाटा हुनेछ: 9,000 अर्ब डलर भन्दा बढी घाटा। यस घाटाले धनी राष्ट्रहरूलाई ठूलो असर पार्नेछ जसले गरीब देशहरूको बजार संकुचनको सामना गर्नुपर्नेछ र कच्चा माल, पुर्जाहरू र कम्पोनेन्टहरूको सन्तुष्टिका लागि उनीहरूको मागमा कमी आएको कारण चेन उत्पादनमा गम्भीर प्रभाव पार्छ।
भू-राजनीतिक प्रभाव को पाठ्यक्रम देश मा निर्भर गर्दै, फरक फरक न्याय गर्न सकिन्छ। धेरै पश्चिमी देशहरू द्वारा उत्पादन होर्डि,, खरीद र खरीद विकल्पहरू अक्सर उनीहरूको आवश्यकता भन्दा बढी हुन सक्छ र शायद उत्पादन आफैंले, घरेलु राजनीतिको गतिशीलता, वा डेलिभरी समयको बारेमा अनिश्चिततामा, तर पक्कै पनि सम्भव प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष परिणामहरू देखिन्छ। अवमूल्यन पश्चिमी-उत्पादित खोपको अभाव रूसी र चिनियाँ खोपहरूको उपयोगको पक्षमा छ। राष्ट्रपति शी जिनपिंगले अबू धाबीमा घोषणा गरेको चिनियाँ खोप कूटनीतिले यस पक्षको पक्ष लिनेछ भन्ने कुरामा कुनै श doubt्का छैन। सबै देशले प्रयोग गर्न सक्दछन्, र यसले राष्ट्रपति बिडेनले हालसालै चीनसँगको व्यापार प्रतिस्पर्धाको बारेमा घोषणा गरेको योजनालाई समर्थन गर्दैन।
2 पृष्ठ4पछिल्लो अर्को